दलाल भन्छ- सिधाकुरामा गए मारिदिन्छु, नक्कली खेलाडी र कोच बनाई देशको वेज्जत गर्नेको पर्दाफास ! « News24 : Premium News Channel
दलाल भन्छ- सिधाकुरामा गए मारिदिन्छु, नक्कली खेलाडी र कोच बनाई देशको वेज्जत गर्नेको पर्दाफास !
विश्व च्याम्पियनशीपमा नेपालका नक्कली खेलाडी
भनिन्छ,खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलहरुमा देशको प्रतिनिधीत्व गर्दै खेलाडीहरु सहभागी हुँदा देशको नाम उचो हुन्छ । तर विडम्बना पछिल्लो समय नेपाली खेलकुद क्षेत्र विदेशमा मानव तस्कर गर्ने साधन बन्दै गएको छ ।
क्षमतावान वास्तवीक खेलाडीले अवसर नपाइरहँदा खेल क्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यतmीहरुसँग चर्को पैसा असुलेर नक्कली प्रमाण पत्र तथा कागजपत्र तयार पारे खेलाडीको नाममा विदेश पुगीरहेका छन् । कतिसम्मकी खेलको बारेमा केही नजानेका व्यतmीलाई राष्ट्रिय खेलाडी,प्रशिक्षक,टिम म्यानेजर बनाएर विश्वकपमा सहभागी बनाए भने विश्व सामु नेपालको इज्जत के होला ?तर यस्तै भयो २०१६ डिसेम्बर मा इन्डोनेशियाको बालीमा आयोजीत पेंककसिलात मार्शल आर्ट विश्व च्याम्पीएन सिपमा । यो खेलमा नेपालका तर्फबाट खेलाडीका रुपमा रुकुमका सुरेन्द्र बिष्ट,प्रशिक्षकका रुपमा कपिलवस्तुका महेश सिंह र टिम म्यानेजरका रुपमा जाजरकोटाका ललितकुमार बानीया सहभागी थिए । उनिहरुसँग आवश्यक सबै कागज थिए तर सबै नक्कली ।
तर टिमका सबै सदस्यलाई पेंककशिलात भन्ने कस्तो खेल हो,कसरी खेलीन्छ केही थाहा थिएन । कारण उनिहरु खेलडी न भै खेलाडीको नाममा इन्डोनेशिया,ब्राजील हुँदै अमेरीका जानका लागेका नेपालीहरु थिए । र उनिहरुसँग ६० लाख रुपयौँ लिएर खेलाडी बनाएका थिए पेंकसिलात मार्सल आर्ट नेपालका अध्यक्ष टिकाराम मोटे बसाई ठकुरीले ।उद्घानटन खेल नै नेपाल भर्सेस उजबेगस्तान बिच थियो । त्यसको लागि नेपालको प्रतिनिधीत्व गरेका सुरेन्द्र बिष्टको नाममा मञ्चबाट बारम्बार घोषणा भयो तर खेलाडीका रुपमा सहभागी भएका बिष्टलाई रिङ उक्लीने शाहस आएन ।यदि उनि रिङमा उक्लीएको भए उजबेगस्तानका राष्ट्रिय खेलाडी ओतावेक नशीमजोनोवको एकै प्राहारमा रिङ आउट हुने निश्चीत थियो । अन्तराष्ट्रिय ख्याती पाएका खेलाडीसँग नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी बनेर रिङमा उत्रिदाँ र एकै प्रहारमा नकआट हँुदा देशको इज्जत कहाँ जाला यहि सोचेर बिष्टले आफ्नो पटक पटक उद्घोष हुँदा पनि नसुने झैँ गरे ।
उद्घाटमा सबै खेलाडीसँगै उनिहरुले पनि नेपाल झण्डा बोकेरै मार्च पास गरे।उनिहरुसँग २ जना वास्तवीक खेलाडी पनि थिए तर नक्कली प्रशिक्षक र म्यानेजरका कारण सक्कली खेलाडीले खेल्न पाएनन् ।यसरी राष्ट्रको वेइज्जत भयो मात्र एक मानव तस्करी गर्ने मानिसको कारण । देशका वेइज्जती अझ थपीयो जब च्याम्पीएनशिप सकिएपनि उनिहरुलाई टिकाराम मोटे बसाई ठकुरीले आयोजकले दिएको होटलमा ४ महिनासम्म राखेर पैसा नतिरी भागे ।
खास उनिहरुको टिमलाई टिकाराम मोटे बसाई ठकुरीले खेलाडी बनाएर थाइल्याण्ड,इन्डोनेशीया,ब्राजील हुँदै अमेरीका पु¥याउने भन्दै जनही १५ लाख रुपयौँ लिएका थिए । जस मध्ये ३ जनालाई इन्डोनेशिया खेलमा पु¥याएपनि २ जना भने थाइल्याण्डबाटै फर्कीका थिए । अहिले टिकाराम मोटे बसाई ठकुरी कम्बोडीयामा छन् । आँफुहरुलाई नक्कली खेलाडी बनाएर लाखौँ ठग्नुको साथै देशकै इज्जत माथी दाग लगाउने बिरुद्व संचार माध्यमा जान्छु भन्दा ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेका छन् ।
अहिले पनि टिकारामले कम्बोडीयाबाटै खेलाडी बनाएर मानव तस्करी गरीरहेको पीडितहरुको दाबी छ । यतिखेर पनि टिकाराम मोटे बसाई ठकुरी सयौँ नेपालीहरुलाई अमेरीका,बेलायत लैजान्छु भन्दै ठगी रहेका छन् । राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठा माथी खेलावाड गर्ने यस्ता धेरै व्यतmी र गिरोह खेलकुद क्षेत्रमा छन् ।